what, when, why: नेपाली font डाउनलोड गर्नुस्
नेपाली font डाउनलोड गर्नुस्
मेरो कम्प्यूटरमा यी साबै नेपालि फोन्ट पनि राखेर हेरे तर इन्टरनेटमा annapurnapost.com भन्ने साइट मा अन्नपुर्ण पोष्टमा नेपालिको कुन फोन्ट प्रयोगमा छ पटै लागेको छैन।
अन्नपूर्ण पोस्ट http://www.annapurnapost.com/ मा खोल्यो भने खुल्छ । तर त्यो साईटको आर्टिकलहरु कपि पेस्ट गर्न भने मिल्दैन । खै कुन फन्ट हो मलाई पनि थाहा भएन ।
mero computer ma tapai ko yo site ko nepali font nai mildaina kun font halne hola dai.unicode bhaye ra hoki dai.k garne dai?
यसमा युनिकोड use गरिएको छ । तपाईंले XP को सि.डि. CDRom मा हाल्नुहोस् र control pannel खोल्नुहोस्, त्यहा Regional Language Option मा double क्लिक गर्नुहोस् । Language Tab मा जानुहोस् र Supplemental language support को तल दुबै चेक बक्समा tick लगाइदिनुहोस् र apply गरेर ओके गर्नुहोस् । XP ले फाइल कपि गर्न थाल्नेछ । यति गरेर हेर्नुहोस् शायद support गर्छ कि ?
हामीले शेभ गरेको फोल्डर हरुलाई पासपोर्ट प्रोटेक्ट गर्न मिल्दैन दाई
चन्द्रश्वर बस्ताकोटी, कास्कीकोट-८ , कास्की हाल जोमसोम, मुस्ताङ said...
www.annapurnapost.com kholda pani annapurna post ko aacheyar aaudaina mero computer ta kina hola